Anidaso Bɛn na Ɛwɔ Hɔ Ma Me Nananom a Wɔawuwu? Wobenya Owusɔre Anaa?
ASƐM A ƐDA SO Sigaret Redi Nnipa Awu
ASƐM A ƐDA SO Sigaret​—Onyankopɔn Bu no Sɛn?
Nkwa Paanoo No​—Woaka Ahwɛ?
Anidaso Bɛn na Ɛwɔ Hɔ Ma Me Nananom a Wɔawuwu?
Tetefo Baasa a Wɔpɛɛ Nokware Akyi Kwan​—Ekosii Sɛn?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Moore Ndebele Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zande Zulu
Ɔwɛn-Aban | June 2014
BERE bi, Korea atesɛm krataa bi de asɛm bi too gua a obiara ani bɔ so pɛ, na atwe no. Asɛm a na ɛda so ne sɛ: “‘Shim Cheong Yɛ Onipa Pa’—Yesu Ho Asɛm a Wante Nti Ɔkɔɔ Ɔbonsam Gya mu Anaa?”—The Chosun Ilbo.
Nea enti a obiara adwene kɔɔ saa asɛm no so ne sɛ, Shim Cheong yɛ Koreafo anansesɛm mu nipa a ɔde ne ho bɔɔ afɔre boaa ne papa nifuraefo. Nkurɔfo abɔ saa ababaa no din pa mfe pii. Ɛnnɛ ne nnɛ yi nyinaa, wokɔ Korea a, wobu Shim Cheong sɛ obi a ɔsom ne papa yiye.
Nnipa bebree tee nka sɛ, sɛ obi ka sɛ onipa pa a ɔte saa ammɔ asu ammɛyɛ Kristoni nti ɔbɛkɔ Ɔbonsam gya mu a, ɛnde na entwa yiye. Ebinom mpo de, na wɔmpɛ saa asɛm no atie koraa, efisɛ wɔkyerɛ sɛ Shim Cheong wui koraa ansa na Kristosom redu n’akuraase.
Atesɛm krataa no kaa ɔsɔfo bi asɛm. Wobisaa no sɛ wɔn a wɔansua Yesu ho ade na wowuwui no, wɔbɛkɔ Ɔbonsam gya mu anaa. Obuae sɛ: “Yennim. Yesusuw sɛ Onyankopɔn no ara nim ɔkwan a ɔde [saa nnipa no] bɛfa so.”
EHIA MA NKWAGYE
The New Catholic Encyclopedia ka sɛ: “Asubɔ hia ansa na obi anya nkwa. Kristo ankasa kaa sɛ, sɛ wɔamfa nsu ne Honhom Kronkron anwo obi a, ɔrentumi nkɔ Onyankopɔn Ahenni mu (Yoh 3:5).” Eyi nti, ebinom gye di sɛ wɔn a wɔammɔ asu ansa na wɔrewuwu no, wɔbɛkɔ Ɔbonsam gya mu anaa wobenya asotwe foforo.
Nanso nnipa pii nhu ntease biara a ɛwɔ saa asɛm no mu. Nnipa mpempem pii ansua Bible da na wowui. Enti ɛyɛ ne kwan so sɛ wɔyɛ wɔn ayayade daa? Dɛn na Bible ka wɔ ho?
ANIDASO A ƐWƆ BIBLE MU
Sɛ yɛhwɛ Bible mu a, yehu adwene a Onyankopɔn wɔ wɔ nnipa a wɔante ne ho asɛm da na wowui no ho. Asomafo Nnwuma 17:30 ma yɛn awerɛhyem sɛ: “Onyankopɔn buu n’ani guu mmere a na wonnim hwee no so.” Ɛnde wɔn a wɔannya hokwan ansua Onyankopɔn ho ade no, dɛn na Bible ka fa wɔn ho?
Yesu hyɛɛ bɔ sɛ: “Wobɛka me ho wɔ Paradise.” Dɛn na na ɔrepɛ akyerɛ?
Yebehu mmuae no wɔ Yesu asɛm bi a ɔkae mu. Ɔkaa saa asɛm no kyerɛɛ ɔdebɔneyɛfo bi a na ɔsɛn ne nkyɛn. Ɔbarima no ka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Sɛ woba w’ahenni mu a, kae me.” Dɛn na Yesu nso ka kyerɛɛ no? Ɔkaa sɛ: “Nokwarem mise wo nnɛ sɛ, wobɛka me ho wɔ Paradise.”—Luka 23:39-43.
Ná Yesu rehyɛ ɔbarima no bɔ sɛ ɔbɛkɔ soro anaa? Dabi. Sɛ obi betumi akɔ ɔsoro Ahenni mu a, gye sɛ wɔde nsu ne honhom ‘wo no bio,’ nanso ɔbarima no de, na wɔnyɛɛ no saa. (Yohane 3:3-6) Nea na Yesu repɛ akyerɛ ne sɛ, ɔdebɔneyɛfo no benyan aba Paradise. Bible nhoma a edi kan no ka asase so Paradise a na wɔfrɛ no Eden turo no ho asɛm. Esiane sɛ na ɔbarima no yɛ Yudani nti, na ɛrenyɛ no ade foforo. (Genesis 2:8) Enti asɛm a Yesu ka kyerɛɛ ɔdebɔneyɛfo no, na ɔde rema no awerɛhyem sɛ Paradise no ba asase so bio a, obenyan no ma wabɛtena mu bi.
Nokwasɛm ne sɛ, Bible hyɛ bɔ sɛ bere bi bɛba a “wɔn a wɔteɛ ne wɔn a wɔnteɛ bɛsɔre afi awufo mu.” (Asomafo Nnwuma 24:15) Nnipa binom wɔ hɔ a, wɔantumi anyɛ Onyankopɔn apɛde efisɛ wɔante ne ho asɛm da. Saa nnipa yi na Bible ka wɔn ho asɛm sɛ “wɔn a wɔnteɛ” no. Ɔbarima a ɔnteɛ a Yesu hyɛɛ no bɔ no, Yesu benyan no aka nnipa foforo a wɔn nso ante Onyankopɔn ho asɛm ansa na wɔrewuwu no ho. Ebetumi aba sɛ nnipa mpempem pii a wɔte saa na Yesu benyan wɔn. Afei, bere a wɔte asase so Paradise mu no, wɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn nea Onyankopɔn pɛ, na wodi ne mmara so a, ɛbɛkyerɛ sɛ wɔdɔ no.
BERE A WƆANYAN WƆN A WƆNTEƐ NO
Sɛ wonyan wɔn a wɔnteɛ no a, nea wɔayɛ atwam na wobegyina so abu wɔn atɛn anaa? Dabi. Romafo 6:7 ka sɛ: “Nea wawu no, wɔabu no bem afi ne bɔne ho.” Bere a wɔn a wɔnteɛ no wui no, wotuaa wɔn bɔne ho ka. Enti ɛnyɛ bɔne a Onyankopɔn apɛde a wonnim nti wɔyɛe no na wobegyina so abu wɔn atɛn. Mmom, wɔn atemmu begyina nea wɔbɛyɛ wɔ wɔn wusɔre akyi. Sɛ wonyan wɔn a, mfaso bɛn na wobenya?
Sɛ wɔn a wɔnteɛ no san ba a, wobenya hokwan asua Onyankopɔn mmara. Wobebuebue sɛnkyerɛnne kwan so nhoma mmobɔwee bi mu de saa mmara no ato gua. Wobebu wɔn atɛn “sɛnea wɔn nnwuma te.” Ɛno kyerɛ sɛ, atemmu a wobenya no begyina Onyankopɔn mmara a wɔde bɛyɛ adwuma anaa wɔmfa nyɛ adwuma so. (Adiyisɛm 20:12, 13) Eyi bɛyɛ bere a edi kan koraa a wɔn a wɔnteɛ no mu pii benya hokwan de asua Onyankopɔn apɛde na wɔayɛ. Ɛno bɛma wɔanya daa nkwa wɔ asase so.
Saa Bible nkyerɛkyerɛ yi ama nnipa pii a biribi nti na wonnye Onyankopɔn nni bio no asan anya ne mu gyidi. Saa na ɛyɛɛ Yeong Sug. Wɔtetee no ma ɔbɛyɛɛ Katolekni mapa. Ná n’abusuafo binom yɛ asɔfo. Na ɔpɛ sɛ ɔyɛ Roman sista, enti ɔkɔɔ asɔfodi sukuu. Akyiri yi, nneɛma a ohui wɔ hɔ nti, ogyaee. Nea ɛsɛee asɛm no koraa ne sɛ na onnye Ɔbonsam gya nkyerɛkyerɛ no ntom, efisɛ na ogye di sɛ obi a ɔwɔ atɛntrenee ne ɔdɔ ntumi nyɛ nnipa ayayade wɔ ogya mu.
Emu hɔ ara na Yehowa Dansefo bi kyerɛɛ Yeong Sug asɛm bi a ɛwɔ Bible mu. Asɛm no kenkan sɛ: “Ateasefo nim sɛ wobewuwu; awufo de, wonnim biribiara, na wonni akatua biara bio.” (Ɔsɛnkafo 9:5) Ɔdansefo no boaa no ma ohuu sɛ ne nananom a wɔawuwu no, ɛnyɛ sɛ wɔrehu amane wɔ Ɔbonsam gya mu, na mmom wɔadeda wɔ owu mu retwɛn owusɔre.
Yeong Sug hui sɛ nnipa pii nhuu nokware a ɛwɔ Bible mu no, enti ɔde Yesu asɛm a ɛwɔ Mateo 24:14 no yɛɛ n’ahiasɛm. Ɛhɔ ka sɛ: “Wɔbɛka ahenni ho asɛmpa yi wɔ asase so nyinaa de adi amanaman nyinaa adanse; ɛno ansa na awiei no bɛba.” Anidaso a ɛyɛ anigye a Bible ama wabenya no, ɛnnɛ ɔno nso ka saa asɛmpa no kyerɛ afoforo.
“ONYANKOPƆN NHWƐ NNIPA ANIM”
Bible ka kyerɛ yɛn sɛ: “Onyankopɔn nhwɛ nnipa anim, na mmom ɔman biara mu no, onipa a osuro no na ɔyɛ adetrenee no, ogye no tom.” (Asomafo Nnwuma 10:34, 35) Onyankopɔn dɔ “trenee ne atɛntrenee,” enti ɔrebu atɛn a, ɔrenyɛ nyiyim anaa animhwɛ da.—Dwom 33:5.
June 2014 | Onyankopɔn Bu Sigaretnom Sɛn?
ƆWƐN-ABAN June 2014 | Onyankopɔn Bu Sigaretnom Sɛn?